दोलखामा आपराधिक घटनामा बृद्धि ! - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
दोलखामा आपराधिक घटनामा बृद्धि !
गत दुई वर्षको तुलनामा दोलखामा आपराधिक घटनामा बृद्धि भएको छ । आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुरा जानकारी दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १६४ र २०७२/७३ मा १७३ आपराधिक घटना दर्ता भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १८९ घटना दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । तर प्रहरी नायव उपरीक्षक कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आपराधिक घटना संख्या बढी देखिनुको कारण केही सार्वजनिक अपराधका घटना बढी दर्ता हुनु रहेको बताए । उनले सम्भावित सार्वजनिक तथा फौजदारी अपराध घटाउनका लागि सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गरिनुले मुद्दा संख्या बढेको बताए । उनले भने, ‘तर समग्रमा आपराधिक घटना भने कम भएका छन् ।’
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा केही सार्वजनिक अपराधका घटना २७ भएकोमा २०७३/०७४ मा त्यस्ता घटनाको संख्या ५२ रहेको छ । त्यसैगरी सवारी ज्यानसम्बन्धी घटनामा पनि बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ जनाको सवारी र्दुघटनाबाट ज्यान गएकोमा सोभन्दा अघिल्लो वर्ष २ जनाको मात्रै ज्यान गएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा दर्ताको १ सय ८९ वटा मुद्धा झण्डै आधा मुद्धा फछ्र्यौट हुन सकेको छैन । प्रहरीले अनुसन्धान गरी दायर गरेको मुद्धामा एक सय वटा फछ्र्यौट भए तापनि ८९ वटा फछ्र्यौट हुन नसकेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले गत आर्थिक वर्ष भित्र गरेका कामको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दोलखाका प्रहरी प्रमुख रामेश्वर कार्कीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा मुद्धा बढी नै दायर भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा १७३ वटा मुद्धा दायर भएको थियो ।
डिएसपी कार्कीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ३४ प्रकारका घटनाको अनुसन्धान गरी मुद्धा दायर गरेको जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आत्महत्या गर्ने पुरुषको संख्या बढेको छ । गत वर्ष महिला १३ जना, पुरुष २२ जना र बालिका ४ जनाले आत्महत्या गरेको उनले जानकारी दिए ।